Navigation Home Latest Categories Kawi Eats
All posts Weird Food Food History National Food Theme Restaurant Videos Others
All posts The Fit Slay Queens Self Discovery Life Hacks Beauty Hacks Digital Detox of the Week Videos Inspiration/Aspiration/Motivation Movies | Books | Apps Others relationship Power Punch
Get in Touch Call Us Message Us Mail Us Let's get Social Facebook Instagram Youtube
Copyright Kawi. All Rights Reserved
Home Kawi Eats Kawi Inspires
Sort by Most Recent Most Viewed Most Liked
ကိုယ့်အိမ်ရှင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့လူတွေထဲမှာ သင်ပါနေပြီလား??? In:Kawi Inspires, Others
တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိဘဲ ကိုယ့်အိမ်ရှင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီး အမှိုက်တွေ၊ သုံးပြီးသားပလတ်စတစ်တွေကို အလွယ်တကူပဲ စွန့်ပစ်လိုက်မိတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ကြိမ်၊၊နှစ်ကြိမ်စွန့်ပစ်မိတာက စပြီး သတိမထားမိတဲ့ အချိန်ခဏအတွင်းမှာ စွန့်ပစ်မိတဲ့ အကြိမ်တွေများလာလေလေ မိမိပတ်ဝန်းကျင်က ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်လာလေလေ ပါပဲ။ ဒီလို ညစ်ပတ်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေတဆင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ အများကြီး မိမိအိမ်ကို တစ်ဖန်ပြန်လည် သက်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေ အလွယ်တကူ စွန့်ပစ်မယ့်အစား ပြန်လည်အသုံးပြုလိုု့ရတာတွေကို ပြန်သုံးပြီး၊ စွန့်ပစ်သင့်တာတွေကို စနစ်တကျ သေချာစွန့်ပစ်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်က သင့်အိမ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်နေလို့ပါပဲ။
ဘဝမှာတစ်ယောက်တည်း အားငယ်နေရင်တောင်ခြေလှမ်းတွေမရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့။ In:Kawi Inspires, The Fit Slay Queens
“ဖတ်…ဖတ်….ဖတ်….ဖတ်” အချိန်ကမနက် ၅ နာရီ။ လမ်းမအလယ်မှာ ခိုင့် ခြေလှမ်းသံက စည်းချက်မှန်မှန်ထွက်နေတယ်။ ညအမှောင်မပြယ်သေးပေမယ့် လမ်းမီးတွေကြောင့် လမ်းမကြီးကလင်းနေလို့ တော်သေးတယ်ဆိုပြီး တွေးနေမိတယ်။ ဒီနှစ်တော့ 42km ပြေးဖြစ်တယ်။ ဒီ၂၀၁၉ ရိုးမမာရသွန်ပွဲ က ခိုင့်ရဲ့ ၈ ကြိမ်မြောက် အပြေးပြိုင်ပွဲပါ။ 42km ပြေးဖို့ဆိုတာ အတော်မလွယ်တဲ့အရာပါ။ ၂၆မိုင် အကွာအဝေးကိုပြေးဖို့ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်က အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ 42km ပြေးလမ်းမပေါ်ရောက်နေပြီ။ အသက်ကိုမှန်မှန်ရှုရင်း ပုံမှန်ပြေးနှုန်းထက် နည်းနည်းပိုမြန်ထားလိုက်တယ်။ ဒါမှ ကြာလာတဲ့အခါ အရှိန်ကျမှာနဲ့ဆိုတော့ အတော်ဖြစ်မှာ။ ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပြေးနေရင်း ပထမဆုံးစပြေးတဲ့ အချိန်ကိုပြန်မြင်ယောင်လာမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ၂၀၁၄ ခုနှစ် House Surgeon ဆင်းနေတုန်း။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ပြေးတယ်ဆိုတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ ဝေးနေသေးတယ်ပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေအဆွယ်ကောင်းတော့ ၂၀၁၄ KBZ Music Run ဝင်ပြေးဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံးပြေးတဲ့ပွဲပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးပါတာရော အေးအေးဆေးဆေးပြေးနေတာရော ဆိုတော့ သိပ်မထူးခြားခဲ့ဘူး။ နောက်နှစ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ရိုးမမာရသွန်မှာ 21km ကို စာရင်းသွင်းပြီး ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တကယ့် ပြိုင်ပွဲနေ့ကျတော့ အချိန်မှားပြီး ရောက်သွားခဲ့လို့ 10km တန်းကိုပဲ ပန်းဝင်အောင် ပြေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ 10km ကို ပထမဦးဆုံး ပြေးဖူးတာလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် ပြိုင်ပွဲမဝင်ခင် training တွေ လုပ်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိခဲ့တဲ့အတွက် ပြေးတဲ့အချိန်မှာ အရမ်းကို ခက်ခဲပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်မီ ပန်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ နာကျင်တာတွေ ပင်ပန်းတာတွေ ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိလောက်အောင် ပျောက်သွားပြီး ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုကို ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ရအောင် ကြိုးစားပြီး ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့ကြားက ပန်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့ ခံစားချက်ကို ကြိုက်သွားတဲ့အတွက် နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ဝင်ပြိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်ထက်ပိုပြီး စနစ်တကျ training တွေ ပြင်ဆင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ result ရအောင် ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေ့ါ။ မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ပေါ့။ တခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်း မပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်နဲ့အတူတူ လိုက်ပြေးပေးမယ့် အဖော်လည်း မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါရအောင်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အားတင်းပြီး 21km ကို ဝင်ပြေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မပြေးခင်တစ်ရက်က ဘယ်ဘက်ဒူးမှာ ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တဲ့အတွက် 5km လောက်လည်းရောက်ရော ဒဏ်ရာရထားတဲ့ ဘယ်ဘက်ဒူးက စနာလာပါတယ်။ အားငယ်နေတဲ့စိတ်တောင် ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိတော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ အိတ်ထဲမှာ လိုရမယ်ရ ယူလာတဲ့ ပိုက်ဆံလေးပါတယ်။ ငါအဆုံးထိ မပြေးဘဲနဲ့ taxi ငှားပြီးပြန်သွားရင်ကောင်းမလားပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်က လက်မခံခဲ့ဘူး။ ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ငါရအောင်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ 21km ကို ပန်းဝင်အောင်ပြေးခဲ့တယ်။ အမြန်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့်လည်း ပန်းဝင်ရမယ့် အချိန်အတွင်း ပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ခြေထောက်စနာတဲ့အချိန်က စပြီးပြေးတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကတော့ တကယ့်ကိုအမှတ်တရပါပဲ။ ကျန်တဲ့ခရီးတစ်ဝက်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမရခဲ့တာတွေ ပျော့ညံ့တယ်ထင်ခဲ့မိတာတွေ မှားတယ်ထင်မိတာတွေ မရှိတော့တာခံစားမိလာတယ်။ ငါရှေ့လျှှောက်ဘယ်လို ပြေးရမယ်ဆိုတာပဲ အာရုံစိုက်ပြီး တွေးနေမိတယ်။ တစ်ယောက်ထဲပြေးနေရပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်အများကြီးရှိလာတယ်။ ပန်းဝင်တဲ့စည်းကို ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသေချာသွားတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ငါပြေးတာကိုကြိုက်တယ်။ ငါ့အတွက်ပဲငါပြေးတော့မယ်။ ပြိုင်ပွဲပြီးတော်တော်ကြာတဲ့အထိ ဒဏ်ဖြစ်ထားတဲ့ ခြေထောက်က နာနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ခဏနားလို်က်ရပေမယ့် ခြေထောက်နာတာပျောက်ပျောက်ချင်း သွားနေကျ၊ လုပ်နေကျအတိုင်း gym ပြန်သွားပြီး အားကစား ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်။ နောက်နှစ်တွေမှာလည်း အပြေးပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ အခြေအနေ ပေးရင်ပေးသလို ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အတူတူအပြေးလေ့ကျင့်တဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းတွေလည်း အများကြီးရခဲ့တယ်။ သူများတွေနဲ့ အတူလေ့ကျင့်ရင်း သင်ယူစရာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ သက်လုံကောင်းဖို့လေ့ကျင့်နည်းတွေ၊ ပုံမှန်အရှိန်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ ပြေးနည်းတွေ စတဲ့ tips မျိုးစုံကို သူတို့ကသင်ပေးခဲ့တယ်လေ။ အဖိုးတန်ဆုံး သင်ခန်းစာကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် knowledge ပဲဖြစ်ဖြစ် share တာ၊ ကူညီပေးတာတွေ၊ အတူတူပန်းဝင်တာတွေဟာ ပန်းဝင်ပြီး ရခဲ့တဲ့ဆုတံဆိပ်တွေထက် အများကြီးပိုတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအတွက် မိုးရွာရွာနေပူပူ အတူတူပြေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ မှာ Pocari Sweats Run မှာ 10km နဲ့ ရိုးမမာရသွန်မှာ 21km ကို ဝင်ပြေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁ရ မှာ 100PLUS ရဲ့ 10km ကို ဝင်ပြေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၈ မှာတော့ MPU Peace Marathon Run 21km ကို ဝင်ပြေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကို သိပ်မယုံတော့ဘူး။ ၅ နှစ်တာပြေးခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှုတွေက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေပါ ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၉ ကတော့ အရေးကြီးတဲ့နှစ်လို့ပြောရင် မမှားပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ 42km Full Marathon ပြေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိန်ခေါ်ကြည့်ဖို့စဉ်းစားမိတဲ့အပြင် 42km Full Marathon ပြေးဖို့ဆိုတာ အပြေးသမားတွေရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်လို့ပါ။ ပြေးနိုင်ပါ့မလားလို့ ချီတုံချတုံဖြစ်နေတဲ့ကြားကပဲ Coach Eileen နဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားပေးစကားနဲ့ပဲ 42km ပြေးလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီလေ။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ အခုနေကလည်းမြင့်လာပြီ၊ ပူကလည်းပူ ခြေထောက်ကလည်းနာနဲ့ ခရီးတော့တစ်ဝက်ကျော်လာပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ taxi ငှားစီးဖို့ပိုက်ဆံဆောင်မလာတော့ဘူး။ တစ်ယောက်တည်းပြေးနေရတယ်လို့လည်း အားမငယ်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပန်းတိုင်မှာ စောင့်ကြိုနေမယ့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် ဘဝမှာတစ်ယောက်တည်း အားငယ်နေရင်တောင်ခြေလှမ်းတွေမရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့။ ကဲ… The Fit Slay Queens အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ခိုင်ကတော့ သူမ စပြေးဖြစ်ခဲ့ပုံကို story လေးနဲ့ပြောပြထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာမပါတာကတော့ ခိုင်တစ်ယောက် Yoma Marathon 2019 မှာ 42km ကိုစံချိန်ကောင်းနဲ့ ပန်းဝင်အောင်ပြေးခဲ့ကြောင်း နဲ့ သူ့ Coach နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သူ့အတွက်အရမ်းကို ဂုဏ်ယူနေကြောင်းပါပဲ။ သူပြောလေ့ရှိတာကတော့ သူလက်လျှှော့မယ်စဉ်းစားမိလိုက်တာက သူရှေ့ ဆက်လျှောက်ဖို့ ခွန်အားပါပဲတဲ့။ ...
စချော့တယ်ဆိုတာပိုချစ်လို့ပါ In: Kawi Inspires, relationship
အိမ်ထောင်သက်တမ်းကြာတဲ့လူတွေ၊ အရမ်းကိုရင့်ကျက်ပြီးစိတ်ထားတတ်တဲ့ သူတွေတော့ ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး။ အတွဲတော်တော်များများမှာတော့ ရန်ဖြစ်ပြီ၊ စိတ်ကောက်ပြီဆိုရင် အတော်ကိုနေရခက်တာပါ။ ရန်ဖြစ်တာကတော်သေးတယ် … ဘာကိုကောက်မှန်းမသိ ကောက်နေပြီဆိုရင် ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိတော့ဘူးလေ။ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာ စိတ်ကောက်နေတဲ့ချစ်သူကို သူဘာသူစိတ်ပြေတဲ့အထိ ထားသင့်လား ကိုယ်ပဲစချော့ရမှာလားဆိုတာ ပြဿနာပါ။ မိန်းကလေးတွေ… အဲ မိန်းကလေးတွေက စိတ်ကောက်တတ်တာပိုများတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်လို့ပါ။ တကယ်က ယောက်ျားလေးတွေလည်း ကောက်တတ်ပါတယ်။ ကွျွန်တော်တို့က စိတ်ကောက်ပြရမှာရှက်တယ်လေ။ ပြီးတော့ မိန်းကလေးတွေက သူတိို့သာစိတ်ကောက်ကြတာ … ကျွန်တော်တို့ကောက်ရင်ကျ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ်ဗျ။ လူလည်တွေ။ Relationship တစ်ခုမှာ တစ်ယောက်ယောက်ကစိတ်ကောက်နေပြီဆို ကတည်းက အထစ်အငေါ့ဖြစ်သွားတာပါ။ ဘယ်သူမှ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်မနေနိုင်ဘူးလေ။ စိတ်ကောက်နေတဲ့သူကလည်း ကျိတ်ကောက်၊ တစ်ဘက်လူကလည်း နေမရထိုင်မရ။ ဒီမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ဘယ်အရာမှ အစွန်းရောက်တာမကောင်းပါဘူးဆိုတာပါ။ ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်များများက စချော့လေ့ရှိကြတယ်။ ဖုန်းစဆက်တယ်၊ စခေါ်တယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ခက်တာကမိန်းကလေးတွေက အဲဒါကိုချော့တယ်လို့ မမြင်ကြဘူးလေ။ ၁။ တစ်ဖက်လူရဲ့အားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ လူတွေက အသည်းအသန်တောင်းပန်တာ … လိုက်ချော့တာမျိုးကိုမှချော့တယ်ထင်ကြလို့ပါ။ တကယ်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားမပြောပဲနေတဲ့ အခြေအနေမှာ တစ်ယောက်ယောက်က စခေါ်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သူ့မာနကို ခဏဘေးဖယ်လိုက်တာပါ။ ဒါကိုတစ်ဖက်လူက တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကောင်လေးက စခေါ်တဲ့အချိန်မှာ ကောင်မလေးကသာ အကြီးအကျယ်ဆက်စိတ်ကောက်နေမယ်၊ သေချာလည်း ဖြေရှင်းတာမျိုးမရှိဘူး ဆိုရင်သေချာပါတယ်။ ရေရှည်မှာမကောင်းပါဘူး။ တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်… ကိုယ်စိတ်ညစ်နေမှာသူမမြင်ချင်လို့၊ ကိုယ့်ကိုသတိရလို့ စခေါ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်ကလည်း အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ ၂။ အကြောင်းရင်းကို အတူဖြေရှင်းပါ။ စိတ်မပြေချင်ဘူးဆိုရင်တောင် တစ်ဖက်လူကို ကိုယ်ဘာလို့စိတ်ဆိုးနေလည်းဆိုတာ ပြောပြပြီး သူ့ကိုဖြေရှင်းခွင့်တော့ ပေးသင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းက ချစ်လို့အရှုံးပေးတာပဲရှိပါတယ် … ဒါကို ဆက်တိုက်အနိုင်ယူနေမယ်ဆိုရင်တော့ လူတိုင်းမှာ သည်းခံတဲ့ limit ဆိုတာရှိတယ်လေနော်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ကောင်မလေး စိတ်ကောက်သွားရင် အရင်စခေါ်လေ့ ရှိတယ်။ မိ်န်းကလေးတွေက အားငယ်တတ်ကြတယ်ထင်တာရယ်၊ သူတစ်ယောက်တည်း စိတ်ညစ်နေတာမဖြစ်စေချင်လို့ပါ။နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့အတူ တိုင်ပင်ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ ကိစ္စတွေကို silent war နဲ့အဆုံးမသတ်စေချင်လို့ပါ။ ဒါဆိုရင် မချော့ပဲထားလိုက်ရင်ရော… ?“If our love is insanity, why are you my clarity?” ဆိုတဲ့ Zedd နဲ့ fox ရဲ့ clarity ဆိုတဲ့သီချင်းကို သိကြမလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီသီချင်းရဲ့ chorus ပိုဒ်လေးကိုကြားတိုင်းပြုံးမိတယ်။ အဲဒီ သီချင်းစာသားလိုပါပဲ …. ဒီလူနဲ့ အဆင်မပြေလို့ ကျွန်တော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရင် ဒီလူနဲ့ အဆင်ပြေမှပဲ ကျွန်တော့်စိတ်က ကြည်လင်မှာမို့လို့ပါ။ ဒီလိုနဲဲ့ပဲ သူကျွန်တော့်ကိုစိတ်ကောက်ရင် ကျွန်တော်ပဲစခေါ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါ ချော့တာမဟုတ်ဘူးလို့ သူထင်ရင်ထင်နေမယ်။ တစ်ရက်တော့သူပြောလာလို့ ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ် … “မင်းတောင်စခေါ်နို်င်လို့လား”လို့။ သူခဏငြိမ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်တယ် “မင်းမလုပ်နို်င်တဲ့ အရာကိုကိုယ်အမြဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့”လို့။ တကယ်တော့ ဘဝကရှင်းရှင်းလေးပါ။ လူတိုင်းမှာမာန ရှိပါတယ် … ဒါပေမယ့် သတိရတယ်မလား … စခေါ်လိုက်ပါ ကိုယ်မှားနေရင် တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို တန်ဖိုးထားပါ…. ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့ဗျာ။ -Remy ...
Share your page with the world, just tap an icon.
© Kawi . All rights reserved.